AccuWeather: Weather Tracker & Live Forecast Maps 5.8.1.2.11 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.8.1.2.11 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
တိကျမှန်ကန်သောရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်, Real-time သတိပေးချက်များနှင့်ပြင်းထန်သောရာသီဥတုသတိပေးချက်များဝယ်လိုအား on- ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီနေ့ရာသီဥတုကခန့်မှန်းချက်, နွေဦးနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ပိုပြီးရယူပါ!
AccuWeather ကနေမိုးလေဝသသတိပေးချက်များကိုသူတို့ရဲ့တိကျမှန်ကန်မှုအတွက်သာလွန်ဖြစ်ကြသည်။ လေ, နေရောင်, ဒါမှမဟုတ်မိုးရွာရွာလာကြ, သငျသညျ AccuWeather ရဲ့ရာသီဥတုကရေဒါနှင့်အတူရှေ့သို့တဦးတည်းခြေလှမ်းဆက်နေလို့ရပါတယ်။ နေ့စဉ်ခန့်မှန်းချက်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသတိပေးချက်များနှင့်တိကျမှန်ကန်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူရာသီဥတုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအဘို့ပြင်ဆင်ရလိမ့်မည်။ နေ့စဉ်မိုးလေဝသရိုက်ချက်မုန်တိုင်းသတိပေးချက်များ, ရာသီဥတုနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့် RealFeel Temperature®သည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံသငျသညျစောင့်ရှောက်သော 2. ပြင်းထန်သောရာသီဥတုသတိပေးချက်များ - Real-time ရာသီဥတုသတိပေးချက်များနှင့်မုန်တိုင်းသတိပေးချက်နှင့်အတူမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်မဆိုပြင်းထန်ရာသီဥတုဖြစ်ရပ်အဘို့ပြင်ဆင်ယူကြနှင့်။
ဒေသခံခန့်မှန်းချက်ယနေ့ရဲ့အပူချိန်နှင့်ပိုပြီး! တိုက်ရိုက်ရာသီဥတု stats သငျသညျကို real-time ရာသီဥတု updates များကိုပေး။ မုန်တိုင်းသတိပေးချက်များ, ပြင်းထန်သောရာသီဥတုသတိပေးချက်များနှင့်စိုထိုင်းဆအစီရင်ခံစာများကနေ - သင်လိုအပ်သမျှရာသီဥတုသတိပေးချက်များကို app ၌တရားရှိပါတယ်။
ဒီနေ့ရာသီဥတုကခန့်မှန်းချက်ထက်ကျော်လွန်သွားပါ။ နေ့စဉ်ခန့်မှန်းချက်အနေဖြင့်နွေဦးရာသီဥတုကသတိပေးချက်များမှသင်ရသတင်းအချက်အလက်အဘယ်အရာကို type ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ သငျသညျယနေ့ရာသီဥတုသို့မဟုတ်ယနေ့အပူချိန်ချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, AccuWeather တစ်ဦးခြားနားချက်နှင့်အတူရာသီဥတုကြိုတင်ခန့်မှန်းပါ!
sirlecorrea စတိုး0233
APK ဗားရွင္း 5.8.1.2.11
Release date: 2019-05-25 03:32:46